နွေရာသီလူငယ်များသို့စဉ်အတွင်းကောလိပ်များသွားရောက်မ5အကြောင်းရင်းများ
သမားရိုးကျသည်ပညာကိုနွေရာသီအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းကောလိပ်များသို့သွားရောက်ခြင်းနှင့် Tour တဦးတည်းကောလိပ်ကျောက်ခဲနှင့်ငှက်နှစ်ကောင်ကိုသတ်မယ့်စမတ်, ဘတ်ဂျက်-သတိလမ်းကြောင်းကြောင့်ရှိပါတယ်။ သမားရိုးကျသည်ပညာကိုမှား၏။ ဤတွင်ငါးအကြောင်းပြချက်ဘာဖြစ်လို့နေသောခေါင်းစဉ်:
ကောလိပ်များနွေရာသီအတွက်ဣနြေ္ဒဖြစ်ကြသည်။ ကောလိပ်ကျောင်းနွေရာသီချိုးနှင့်အဓိကရုံးပိတ်ရက်ကာလအတွင်းစွန့်ပစ်ခံရဖို့လေ့ဒါကြောင့်သင်သည်အဘယ်အရာကိုကျောင်းအဘို့အကောင်းတစ်ဦးခံစားရလိမျ့မညျမဟုနှင့် ပို. အရေးကြီးသည်, လူများကယ့်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြသည်။ ကျောင်းသားတစ်ဦးတစ်ကောလိပ်ခရီးစဉ်အပေါ်သူ့ကိုယ်သူတောင်းဆိုနေတာရပါမည်အကြီးမားဆုံး, အရေးအပါဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုကို "ကျွန်မဒီမှာ fit သလား" ဖြစ်ပါသည် ပတ်လည်စည်ကားနေပါတယ် 30000 ပိုပြီးလူတွေရှိပါတယ်အခါဣနြေ္ဒ, သဘာဝကျောင်းဝင်းအလွန်ကွဲပြားခြားနားတဲ့ခံစားရမယ့်ကြောင့်သင်တို့ကိုမဖြေနိုင်ပါလိမ့်မည်။
Tours မှရှားပါးခြင်းနှင့်ဒြေပျက်ကွက်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျနှစ်ကြိမ်-နေ့စဉ်ခရီးစဉ်ကိုရှာဖွေအလွယ်တကူနွေရာသီလအတွင်းဒြေ tete-a-tetes reserved လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အဆိုပါဒြေအများစုဟာအားလပ်ရက်အပေါ်ဖြစ်တယ်, ခရီးစဉ်များသောအားဖြင့်တစ်ပါတ်အနည်းငယ်ပြန်ဖြတ်နေကြသည်။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းတဲ့နွေရာသီကျောင်းကအတန်းအစားအပေါ်၌ထိုင်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်တူညီလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ နွေရာသီကျောင်းကောလိပ်အတွေ့အကြုံအလွန်အသေးစားနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအစိတ်အပိုင်းအစုဖြစ်ပါတယ်။
ကျောင်းသားများတွေ့ရှိရန်ခက်ခဲကြသည်။ တောင်မှအများဆုံးအထောက်အကူဖြစ်စေကျောင်းဝင်းဧည့်လမ်းညွှန်တစ်ဦးမွေးရာပါဘက်လိုက်မှုရှိပြီး - သူသို့မဟုတ်သူမအသစ်ကကျောင်းသားများကိုစုဆောင်းဖို့ကောလိပ်အားဖြင့်ပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မည်သည့်ကောလိပ်ကျောင်းအလည်အပတ်ခရီးအပေါ်ရည်မှန်းချက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းဟာသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံများအကြောင်းကို chat ဖို့ဆန္ဒရှိပုံမှန်အစည်းအဝေးကျောင်းသားများကိုရှာတွေ့ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျောင်းနှစ်အတွင်းသင်, ကျောင်းသားသမဂ္ဂအတွက်နေရာတိုင်းသည်အခြားသည့်အိပ်ဆောင်, အဟောပြောပွဲခန်းမ, အကို Quad သူတို့ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ နွေရာသီကာလအတွင်း? ကို item # 1 ကိုကြည့်ပါ။
ကောလိပ်ခရီးစဉ်အားမစိုက်ရမဟုတ်သလိုပျော်စရာမဟုတ်ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကနှံ့နှံ့စပ်စပ်ကောလိပ်အလည်အပတ်ခရီးတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာအစီအစဉ်နှင့်တဆင့်ရရှိရန်အရေးပါမေးခွန်းများကိုများစာရင်းကိုနှင့်အတူတစ်ဦးပင်ပန်း, Multi-နာရီလေ့လာရေးခရီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကောလိပ်ကျောင်းခရီးစဉ်တစ်စီးရီးနှင့်အတူသင့်မိသားစုရဲ့အားလပ်ရက်ပေါင်းစပ်ပြီးအပန်းဖြေမဆိုအသိကိုဖျက်ဆီးဖို့သေချာမီးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင်သည်သင်၏အားလပ်ရက်ကနေအားလပ်ရက်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
အငယ်မောင်နှမသင်တို့ကိုမုန်းကြလိမ့်မည်။ ဒါဟာအထက်တန်းကျောင်းများ၏ sophomore သို့မဟုတ်အငယ်တန်းနှစ်ကထက်အငယ်မဆိုမှေးခငျြးမှတရားမျှတမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ (ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့နေရာ,) အလျင်အမြန်အဆုံးမဲ့ခရီးစဉ်၏တာယာများနှင့်ငြီးငွေ့စရာဆိုပါမည်။ တဖန်သင်တို့တစ် twofer များအတွက်မျှော်လင့်ခဲ့ကြသည်ကိစ္စတွင်အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုလျှောက်ထားရန်အတွက်အချိန်မယ့်အခါ, သူတို့ကဒီကျောင်းဝင်း၏အထူးသတိရမည်မဟုတ်, ဒါကြောင့်သင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ပိုကောင်း sightsee သို့မဟုတ်သုတျပုမိုတယ်ရေကူးကန်မှာ, ဒါမှမဟုတ်မှာအားလုံးကကြိုးစားမသင့်အိမ်ထောင်ဖက်နှင့်အတူသူတို့ကိုပယ်ပို့ပေးရန်။
ယင်းတိုက်တန်းနစ်၏နစ်မြုပ်၏တစ်ဦးက Timeline ကို
အဆိုပါ Roses အနံ့: နှင်းဆီအံ့ဖွယ်နှင့်အိန်ဂျယ်လက္ခဏာများ
Mango အဆိပ်? Urushiol dermatitis ကိုဖြစ်စေတဲ့
အစဉ်အဆက် Built 10 ရလဒ်တွေမော်တော်ဆိုင်ကယ်
ကာယဗလဒဏ္ဍာရီ Debunked: ခေါငျးမာခန္ဓာကိုယ်အဆီ, အပိုင်းငါဆုံးရှုံးဖို့ဘယ်လို
က Les Troyens ဇာတ်လမ်းအကျဥ်း
1994 ခုနှစ်အမေရိကန်ပွင့်လင်း: Ernie Els အဆိုပါရှုခင်းအပေါ်ဆိုက်ရောက်
ယင်းကြိယာ၏ example sentences Find
အဆိုပါ 10 အကောင်းဆုံးစေ့ဆော်ကျေးလက်ဂီတသီချင်းများ
အဆိုပါ Beatles သီချင်းများ: "ဒီအတွင်းအလင်း"
ထိပ်တန်း 10 Blake က Shelton သီချင်းများ
အဆိုပါသင်ထောက်ကူပေါ်တွင်အချက်နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုပါ။ PDF ဖိုင်၏ 2nd page ကိုတွင်အဖြေများ
အဆိုပါ 11 Smelliest တိရစ္ဆာန်များ
ပလေတို၏ 'Euthyphro' '
ဒေါက်တာ Seuss အားဖြင့်အလုပ်လုပ်အပေါ်အခြေခံပြီးသီချင်းများနှင့်ဂီတ